Naira Marley Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
musha Africa Singers Naira Marley Nyaya yeUcheche Nyaya pamwe neS Untold Biography Facts
Isu tinokupa yakazara chinyorwa cheNaira Marley Childhood Nhau, Biography, Chokwadi chemhuri, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, Hupenyu hwehukama (Musikana / vakadzi / Vana), Mararamiro, Hupenyu hwega, uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva paaive mwana kusvika paari akakurumbira.
Ehe, isu tese tinoziva nezve rwiyo rwake rwekutsigira rwakamuisa mumambure eNigerian EFCC. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Naira Marley's biography, inoyevedza. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Naira Marley Nyaya Yehucheche Nyaya:
Azeez Fashola akaberekwa pazuva regumi ra Chivabvu 10 kuna amai vake uye baba Mr / Mrs. Fashola muAgege, Lagos mamiriro. Ndiye mumwe wevana vakawanda akazvarwa kuvabereki vake Mr / Mr. Fashola.
Nyika yeNigerian yekumadokero-kweAfrica dzinza rinobva kumhuri yepakati-yemhuri uye mhuri yake midzi yakateerwa pasi kunharaunda dzekare dzeYoruba.
Naira Marley akarererwa kwaakaberekerwa pamwe nevanin'ina vake vane ruzivo rwusinga zivikanwe. Akagara muLagos kudzamara ave nemakore gumi nerimwe chete mushure mezvo akatamira kunogara kuPeckham muLondon.
Naira Marley Upenyu Hure Mumhanzi:
Asati aenda kuPeckham, Naira Marley akange ave nechido chekuve MC. Ehe, iwe wakazvinzwa izvo ... zvikonzero zvake zvekuda kuita shuwa kuva MC zvaive zvekuti aigona kuve muimbi wezwi muindasitiri yevaraidzo.
Naira Marley Dzidzo:
PaPeckham, Naira Marley akachengeta chimiro chake chekuNigeria kunyangwe achigara kure nekumba. Kutenda kwake kwekuda kuve muchengeti weDoost Over iye akasara asina kuzunzwa sezvo akanyoresa kuParlock Hall School mushure mezvo akaenda kuWalworth School kwaakawana GCSE yake.
Ndichiri kudzidza pachikoro cheWalworth, Naira Marley anowana nguva yekushanyira shamwari dzake, vamwe vacho vaive MC.
Panguva dzakasiyana, aigara achiuya nemibvunzo yekuti shamwari dzake dzinoitisa sei nezvebasa ravo reMC uye vanzwe kufara kana mhinduro dzikapihwa mukupindura mibvunzo yake.
Naira Marley Kurarama Kwepakutanga Hupenyu:
Kutevera kupera kwezvidzidzo zvake paWalworth School, Naira Marley akaenderera mberi nekuenderera mberi nedzidzo yake kuPeckham Academy kwaakapedza aine musiyano muBhizinesi.
Akazoenderera mberi nekudzidza Bhizinesi Mutemo paCrossWays College mushure mezvo akabva apinda mumhanzi wenguva yakazara.
Munguva yezvidzidzo zvake kuPeckham Academy, akapinda muchinzvimbo chekutora rap yeshamwari dzake dzeMC dzaigara muPeckham parizvino.
Paaiita chinzvimbo chake chekutarisira, Naira Marley akaona kuti aive aine tarenda remimhanzi kupfuura zvaaigona kufungidzira. Nesimba rakakwira, akadzora zvishuwo zvake kubva pane kufunga kwaMC kuita mimhanzi sebasa renguva yakazara.
Unoziva here?… Naira Marley akaziva nezve rake tarenda remimhanzi kubva kune yake yekutanga studio kutongwa mashandiro ayo aisekesa achikurudzirwa neshamwari dzake.
Akange aburitsa mune imwe yehurukuro dzake kuti “Vakanyora chimwe chinhu uye paivapo nzvimbo panjanji uye ivo vakaita sekuti 'svetuka pairi, murume!' Ndanga ndakafanana, Bro iwe chokwadi? ”.
Chokwadi, akapa mukumbiro wavo uye kuedza kwake kwekutanga kuimba kwakabudirira kupfuura zvaitarisirwa.
Naira Marley Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Kunyangwe Naira Marley akaita pfungwa dzake kuti apinde mumumhanzi wenguva yakazara, aifanira kuita zviitiko uye kudzidziswa nezwi kuti asvike padanho rekushambadzira iro raizomukurudzira kuti ave nyanzvi yemimhanzi.
Pakutanga kwake mumhanzi, Naira Marley aifanira kubata nemhando dzakasiyana dzezvinokanganisa zvinosanganisira kuchengeta vana vake vadiki avo vane ruzivo rwudiki vanozivikanwa nezvake.
Akarega kuenderera mberi nedzidzo yake uye akatora nguva yekuchengeta mwana wake uye nekudzidzira asinganeti kuti abudirire mumhanzi basa rake.
Naira Marley Biography - Kubudirira Nhau:
Mushure mekudzidziswa kwakasimba, Naira Marley akatanga kuburitsa mimhanzi yake mugore ra2014 nekambo kake kekutanga kekuti "Kuroora Juana" uye akazosimuka kuita mukurumbira zvichitevera kuburitswa kwenziyo yake yakanzi "Issa Chinangwa" iyo yaakanyora kutsigira iyo super Eagles kumakwikwi epasi rose emukombe kuRussia.
Nekukurumidza kusvika kunguva yekunyora nhoroondo yaNaira Marley, akagamuchira mukurumbira wekupokana kwake kupokana mumatare ekunyepedzera sezvo akasungwa neEFCC achipomerwa kupindira mukubiridzira kweinternet kwakakurumbira muNigeria - Yahoo-yahoo.
Munguva yekutongwa kwake, akaburitsa rwiyo rwake rwekupedzisira "OPOTOYI" yaive nemamirioni anodarika 3.3 ekuona paYouTube pazuva rechinomwe raJune 7. Izvi zvakamuita kuti ave nemukurumbira saiye-PSQUARE hama, Davido uye Burna Boy, Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Naira Marley Hukama Hupenyu: Musikana, Mukadzi, uye Vana:
Nezve chimiro chake chehukama, Naira Marley anonzi akaroora panguva yekunyora. Akange atozivisa mamiriro ake emuchato paakapihwa mhiko kudare repamusoro muLagos panguva yekutongwa kwake muna May 2019.
Pakutanga kwemuyedzo wake akati. “Ndinonzi Azeez Fashola. Ini ndakaroora vakadzi vaviri uye ndine vana vana. Ivo vese vagari vekuBritain vanogara muUnited Kingdom ”.
Hapana ruzivo rwunozivikanwa nezvehukama hwehukama hwake asati amuka kuva nemukurumbira. Akange atorwawo mumufananidzo aine vana vaviri (mapatya) vanoonekwa sevana vake.
Naira Marley Hupenyu Hwemhuri:
Iyo hombe mimhanzi yeNigerian nyeredzi inobva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure. Muchikamu chino, Tichakuunzira chokwadi nezvevabereki veNaira Marley uye nezve nhengo dzemhuri yake.
Nezve baba vaNaira Marley naamai:
Kunyangwe ave mukurumbira wemimhanzi, Naira Marley haana kuona kukosha kwekuburitsa ruzivo nezve amai vake kana baba vake.
Mazita ababa naamai vaNaira Marley haana kutaurwa mune ruzivo rwese rwakaunganidzwa nezvake. Amai vake vagara vari mutsigiri mukuru waNaira Marley uye vaive naye panguva yekutongwa kwake mudare.
Nezve hama dzaNaira Marley:
Sezvo Naira Marley akachengeta huzhinji hwehupenyu hwake muUK zvakavanzika hazvina zvakawanda zvave kuzivikanwa maererano nehama nehanzvadzi dzake. Akatadza zvakare kutaura nezve nhengo dzemhuri yake kubvira paakasvika kumusha kwake - Nigeria.
Hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa pamusoro pasekuru naambuya vaNaira Marley pamwe nasekuru vake nasekuru nasekuru. Zvakare, hakuna kumbove nezvinyorwa zviri pamutemo kana chirevo chakaitwa maererano nasekuru vake, babamunini, babamunini, babamunini, nasekuru.
Naira Marley Hupenyu Hwako:
Kure kure nekuedza kwaNaira Marley mumhanzi, tinokuunzira chokwadi chehunhu hwake kuti akubatsire kukupa iwe mufananidzo uzere wake. Kutanga, Naira Marley's persona musanganiswa weTaurus.
Akanga agara achirarama mararamiro ake ega ega kunze kwekunge zvave kudikanwa kwaari kuti aburitse chero ruzivo rwakakodzera nezvake kuruzhinji.
Akange atora zvinhu zvekuzvivaraidza nazvo uye zvekufarira fodya pamwe nekukurukura nekuita ongororo nezvekubiridzira kweinternet muNigeria izvo zvakakonzera matambudziko aakasangana nawo neEFCC kutanga kwa2019.
Naira Marley Mararamiro:
Naira Marley akakosha mari inofungidzirwa kuita zviuru mazana manomwe zvemadhora panguva yekunyora. Kwaakabva hupfumi hwake kunonyanya kuve kwake kuita kwake kwemimhanzi uye kuongorora kwake mashandisiro ake kunoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kupesana nezvingafungwe nevanhu, Naira Marley haasati atenga chero imba kubva paakakwira mukurumbira. Zvakarehwa kuti imba yaanogara imba yekuroja iyo inoita kunge yakanyarara inodhura.
Kunyangwe nyenyedzi yemimhanzi angave asina kutenga imba yake, ane mota dzakasiyana dzekunze. Iye achangobva kutaurwa kuti akatenga Porsche Panamera inokwana $ 91,950.
Kuputira nyaya yedu yehucheche hweNaira Marley uye biography, hezvino zvimwe zvishoma kana zvisingazivikanwe chokwadi pamusoro peiyo muimbi weNigerian iyo yaunokubatsira iwe kuti utore mufananidzo wakazara wake.
Chokwadi # 1: Chikonzero chezita rezita:
Naira Marley akagamuchira zita rake rezita "Naira Marley" nekuda kwekurudziro uye kurudziro yaaive nayo kubva kune regege ngano, Bob Marley uyo aionekwa semumwe wemapiyona eregigi.
Chokwadi # 2: Tattoos:
Naira Marley akaisa inktato paruoko rwake rworudyi rine zita "Marlians". Akakanda iwo tattoo paruoko rwake sechiratidzo chekuremekedza kune vateveri vake nekuti anovadaidza kuti Marlians.
Kunyangwe Naira Marley asina kubatwa pakamera achinamata mune chero nzvimbo yekunamatira uye haana kupa chero chirevo chepamutemo maererano nekutenda kwake.
Kunyangwe, isu tinotenda vabereki vaNaira Marley maYoruba maMuslim uye vangangodaro vaive vakamurera nenzira yeIslam, chikonzero chiri chekuti izita rake - Azeez.
Chokwadi # 4: Kunwa uye Kusvuta tsika:
Naira Marley anofarira kuputa. Akazivisa nechivimbo chikonzero nei achida kusvuta kune vezvenhau kakawanda.
Mune kumwe kubvunzurudzwa kwake muna Gumiguru 2019, akadaro “Ndinoda chaizvo kusvuta zvine ruzha. Ini ndinogona kurega pese pandinongotadza kuona chikonzero. Hazvikuvadzi kwandiri. Zvinoita kuti ndigare ndichifara uye ndichiona jeje ”.
Naira Marley's wiki knowledgebase inobatsira iwe kuwana ruzivo nezvake muchidimbu uye zvine mutsindo. Tsvaga pazasi;
Zita rizere Azeez Fashola
Zita reNick Naira Marley
Akazvarwa 10th May 1991
vabereki Mr / Mrs. Fashola
murume Vakadzi vaviri
Children Vana vana
Utsi / Zvinwiwa Ehe
Kutenda nekuverenga Biography yaNaira Marley, muenzaniso wevose maMarlians. Zvikawanda saka, ndinokutendai nekutenda mune Zvatiri uye Zvatinoita.
Ndichiri kuisa ichi chinyorwa paNaira Marley Biography uye Yehucheche Nyaya, vagadziri vedu vaive vakatarisa kururamisa uye kururamisa. Nomutsa isa zvaunotaura kana kutibata nesu kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka pachinyorwa chino nezvake.
Saby mukomana adewale
Naira ndakakunda blow senge iwe
Ndoziva kuti rimwe zuva ndichave mukurumbira.
Hurumende yeNigeria inoda kuverenga iyi inonakidza biography